काँग्रेसको ‘अदृश्य शक्ति’ पूर्वराष्ट्रपति यादवले के गर्लान् ? « रिपोर्टर्स नेपाल
काँग्रेसको ‘अदृश्य शक्ति’ पूर्वराष्ट्रपति यादवले के गर्लान् ?
काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाली काँग्रेसको १०औं महाधिवेशन नजिकिदैछ । जिल्ला अधिवेशनहरु अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्दा केन्द्रमा सभापतिसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने ४ हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुंगो लाग्दैछ ।
अहिलेसम्म ३ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् । बाँकी प्रतिनिधि यसै हप्ता चयन हुनेछन् । अहिलेसम्मको परिणामले सभापतिका आकांक्षी कुनैपनि नेताको पक्षमा एकल बहुमत देखिदैन ।
बलियो पकड भएकामा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्रीहरु प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, कोइराला परिवारबाट महामन्त्री डा. सशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्यहरु सुजाता कोइराला र डा. शेखर कोइराला देखिएका छन् ।
काँग्रेसभित्र एउटा यस्तो शक्तिशाली व्यक्ति छन् जो अदृश्य कुनाबाट सक्रिय छन् । उनी हुन् प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव । काँग्रेसको राजनीतिमा लामो समय लागेर राष्ट्रपति भएपछि पार्टी सदस्यता त्यागेका यादवको पकड देशभर छ ।
विशेषगरी प्रदेश नम्बर २ मा यादवको काँग्रेसभित्र बलियो प्रभाव छ । गृहजिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट जस्ता जिल्लाका काँग्रेसका कतिपय नेताहरु रामवरण यादवसँग नजिक छन् । उनीहरु काँग्रेसको राजनीतिमा प्रभावशाली छन् । यादवका छोरा चन्द्रमोहन, भतिजी किरण यादव र पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवको प्रभाव धनुषा र महोत्तरीमा बलियो छ । यसकारण पनि रामवरणले अदृश्य कुनाबाट खेल्ने भूमिकाले महाधिवेशनमा असर गर्न सक्छ ।
यादव पछिल्लो समय बढी धनुषामा बसे । उनी गृहजिल्लामा बढी बस्नुलाई राजनीतिमा भित्री कुनाबाट भूमिका खेल्नु रहेको विश्लेषण नभएको होइन । प्रदेश २ मा उपसभापति विमलेन्द्र निधि बलियो हुने आँकलन गरिएको छ । तर, रामवरण निकट मानिएका रामकृष्ण यादवको समूह पनि बलियो बन्दैछ । यसबाट पनि काँग्रेस महाधिवेशनमा रामवरणको भूमिकाले निकै असर गर्न सक्छ ।
पूर्वराष्ट्रपति यादव काँग्रेसमा रहँदा कोइराला परिवारसँग नजिक रहे । उनले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालासँग निकटता राखे । वीपी कोइरालाको उपचार गरेका थिए । यसकारण उनको कोइराला परिवारसँग निकटता देखिन्छ । पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग पनि यादवको निकटता छ । कात्तिक महिनामा सिंह प्रदेश २ मा पुग्दा रामकृष्ण यादव र किरण यादवको सक्रियता देखिएको थियो । यो आफैमा अर्थपूर्ण छ ।